ईश्वरको नाम के हो? हामीले त्यो नाम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश ड्रेहु तामिल तेलगु त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिजो मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा वलिसियन वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
के तपाईंको यस्तो कोही साथी छ, जसको नाम तपाईंलाई थाहै छैन? सायद छैन होला। त्यसैगरि बुल्गेरियाकी एक महिलाले भनेझैं “ईश्वरको नामै थाह छैन भने उहाँसित घनिष्ठ हुन असम्भव छ।” खुसीको कुरा, यसअघिको लेखमा बताइएझैं तपाईं ईश्वरसित नजिक भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसैले त उहाँले बाइबलमार्फत तपाईंलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। बाइबलमा यसो लेखिएको पाउँछौं: ‘यहोवा हाम्रा ईश्वर एक मात्र यहोवा हुनुहुन्छ।’—मर्कूस १२:२९.
बाइबलमार्फत ईश्वरले तपाईंलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। बाइबलमा यसो लेखिएको पाउँछौं: ‘यहोवा हाम्रा ईश्वर एक मात्र यहोवा हुनुहुन्छ।’—मर्कूस १२:२९
मानिसहरूले यहोवाको नाम थाह पाऊन्‌ या नपाऊन्‌ अथवा प्रयोग गरून्‌ या नगरून्‌, के त्यसले उहाँलाई फरक पार्छ र? यो कुरा विचार गर्नुहोस्: टेट्राग्रामटन भनेर चिनिने चार वटा हिब्रू अक्षरमा लेखिएको यहोवा नाम मूल हिब्रू धर्मशास्त्रमा झन्डै ७,००० पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ। बाइबलमा यत्ति धेरै पटक उल्लेख गरिएको अरू कुनै नाम छैन। हो, यहोवा हामीले उहाँको नाम थाह पाएको र त्यसलाई प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ। *
एकअर्काको नाम थाह पाउनु मित्रताको पहिलो खुट्किलो हो। के तपाईंलाई ईश्वरको नाम थाह छ?
तर कसै-कसैलाई भने ईश्वर पवित्र अनि सर्वशक्तिमान्‌ हुनुभएकोले उहाँको नाम लिनु भनेको उहाँको अनादर गर्नु हो जस्तो लाग्न सक्छ। हो, जसरी हामी आफ्नो घनिष्ठ साथीको नाम दुरुपयोग गर्दैनौं त्यसरी नै ईश्वरको नाम पनि अनुचित ढङ्गमा लिनु गलत हो। तर यहोवा स्वयम् नै उहाँलाई माया गर्नेहरूले उहाँको नामको आदर गरून्‌ र त्यसबारे अरूलाई बताऊन्‌ भन्ने चाहनुहुन्छ। (भजन ६९:३०, ३१; ९६:२, ८) यो कुरा पनि सम्झनुहोस्, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभएको थियो: “हे स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा बुबा, तपाईंको नाम पवित्र पारियोस्।” हामीले पनि उहाँको नामबारे अरूलाई बताएर यो नाम पवित्र पार्ने काममा भाग लिन सक्छौं। यसो गर्दा हामी उहाँसित अझ घनिष्ठ हुन्छौं।—मत्ती ६:९.
बाइबलमा ईश्वरले ‘उहाँको नाउँको मान गर्नेहरूलाई’ विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। (मलाकी ३:१६, NRV) उहाँको नामको कदर गर्ने मानिसहरूको विषयमा उहाँ यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ: “त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ, र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु।” (भजन ९१:१४, १५, NRV) यदि हामी यहोवासित घनिष्ठ हुन चाहन्छौं भने उहाँको नाम थाह पाउनु अनि प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ।
^ अनु.4दुःखको कुरा, प्रायः पुरानो नियम भनेर चिनिने हिब्रू धर्मशास्त्रमा ईश्वरको नाम यत्ति धेरै पटक उल्लेख गरिएको भए तापनि थुप्रै बाइबल अनुवादमा भने ईश्वरको नाम पाइँदैन। बरु ईश्वरको नामको ठाउँमा “परमप्रभु” अथवा “प्रभु” जस्ता उपाधि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यस विषयमा थप जानकारीको लागि यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको पृष्ठ १९५-१९७ हेर्नुहोस्।
हामी प्रार्थनामार्फत ईश्वरसित कुराकानी गर्छौं, तर कसरी उहाँको कुरा सुन्न सक्छौं त?